Lapho ukuveza obala kuba yifa - I-Thumela RELAY
By TELES RELAY On Agasti 10, 2020
Lapho singena engxenyeni yesibili yale kota yesithathu ka-2020, izwe lomsebenzi alikaze lithole isasasa elinjalo, liqothula konke ukubikezela konyaka omnyama kakhulu emnothweni wezwe. Phakathi kwenhlupheko yezomnotho kanye nenkinga yezempilo, iningi lezinkampani zivuselele izindlela zazo zokuphatha lapho zibhekene nemakethe eguquguqukayo. Kukule ndawo lapho abafundi abathole iziqu abasha noma abafuna ukuphinda bathole imisebenzi kuyodingeka bakhombise ubuhlakani bokuheha ukunaka lowo oqoqayo othola ukuqala kabusha kunokwejwayelekile. Ungama kanjani uphakamise lokho okungeziwe okuncane okuzokwenza umehluko?
Incwadi esembozweni kuvithamini
Ngaphezu kokuvivinya umzimba nje, incwadi yakho yesembozo iphuzu lokuqala lokuxhumana phakathi kwenkampani nomuntu ofuna umsebenzi. Inika amandla kukho konke i-CV yakho engakwazi ukukuhumushela ngale kwesizinda sakho sobungcweti noma semfundo. Iqinisekisa ukuma kwakho, ihumusha amanani ngokuvamile afunwa ngumqashi onolwazi. Ukufomathwa kwayo kudinga okuqhamukayo okuzokukwenza uhlukile ngephrofayili ehambelana kahle nesikhundla. Akuwona nje umbuzo wokukhuluma ngokuqonda kwakho kwemakethe lapho inkampani ekhonjiwe isebenza kuyo, kepha okuningi: ukwabelana ngombono wayo, ukuqonda i-DNA yayo.
Amathiphu wokudlulisa ukuhlolwa kwakho kokushayela okokuqala
Ukuqonda komkhiqizo oqondiwe
Ngenkathi inani elanda njalo lezinkampani lixhumana nge-inthanethi ngokusebenzisa amapulatifomu anikezelwe noma uhlelo lwazo lwendalo, manje kunezindawo ezivumela abafuna umsebenzi ukuthi baqonde kangcono izinhlobo ezahlukahlukene ezihlosiwe, njengokuthi GoWork.fr. Imininingwane egcwele yemibono yabaqashi, iGoWork.fr inika ukuziqhenya kwendawo yabasebenzi abanesipiliyoni ngokwabelana kuvumela abafuna imisebenzi ukuthola okuningi ngezinkampani abazisebenzelayo ezifundeni zabo. Ukubuyekezwa ngaphansi kophawu lokungaziwa okwenza umehluko futhi kukhombise inkampani ngokuhlukile. I-GoWork.fr iyindawo yokuqala ebaluleke kakhulu yokuhlanganisa abaphathi kanye nabasebenzi, ekugcineni inikeze ulwazi lokuphindiselwa emuva ukuthuthukisa umkhiqizo kanye nezimo zokusebenza. Okwamanje emazwenikazi ayisithupha, le ngosi ivula iminyango ngesikhathi esisha empilweni yenkampani ngenxa yenqubo esobala yezaziso zezisebenzi ezivela kumashumi ezinkulungwane zezinkampani ezizinze eFrance.
I-adventure elungiselelwe kangcono
Amathalenta wesifunda Corsica, ofOccitan ou Grand Est yenza izifunda zabo ziphile ngendlela ehlukile, hhayi emjahweni omatasatasa wemibono kepha ngaphezulu ngokwakha okuhlangenwe nakho kwabo ulwazi oluhle oluhlanganisa ulwazi okwenza kube lula ukuqonda izinselelo okufanele zihlangane nomuntu ozifunayo. Ngakho-ke inguqulo yesiFulentshi ye-GoWork.fr portal inikezela ukufinyelela olwazini olubalulekile kulezi zikhathi zobunzima bezomnotho lapho wonke amathemba ahambisana nokululama kancane kancane. Thola umbono kumqashi wakho ngokuqoqa umnyombo wezinqubo zawo ngokubonga kokuqukethwe okunikezwe ngokukhululekile yilabo abazoba ozakwabo kusasa. Umhlaba omusha uvulekile kuwe futhi kukuwe ukuthi wazi ukuthi ufika kanjani lapho. Hlunga, khetha imihlaba esondele kuwe, ulungele uhambe.
TELES RELAY 24419 izikhala 1 amazwana
Umkhandlu Ophakeme Wezimantshi: Inkulumo ephelele eNhloko Yezwe
IRussia: UClinton Njié uyiqala kahle isizini yakhe